कार्तिक ११, २०७४ सुरविन्द्रकुमार पुन
काठमाडौं — राज्यको पुन:संरचना क्रममा रुकुम र नवलपरासी गरी दुई जिल्ला टुक्रिए । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–४ मा उल्लेख गरिएअनुसार हाललाई रकुम जिल्लाका दुई भागमध्ये प्रदेश नं. ५ मा ‘रुकुम (पूर्वी भाग)’ र प्रदेश नं. ६ मा ‘रुकुम (पश्चिम भाग)’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
७५ जिल्लामा २ जिल्ला थपिएपछि ७७ औं जिल्लाको रूपमा पूर्वी रुकुम अर्थात् रुकुम पूर्वको जन्म भयो । फलस्वरूप पूर्वी रुकुम ‘कान्छा जिल्ला’ को रूपमा समेत चिनिएको छ ।
मगर बाहुल्य पूर्वी रुकुमलाई आदिम सांस्कृतिक थलोको रूपमा चिनिन्छ । मगर खाम यहाँको मुख्य भाषा हो । दुई तिहाइ बढी जनसंख्या मगर बहुल रहेको यहाँका समुदायको जीवनशैली हिमाली संस्कृतिसँग मिल्दोजुल्दो छ । २८ असोजमा कार्यकाल सकिएको व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले गत भदौ २५ गते स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमा जिल्लाहरूको नयाँ वर्गीकरण गर्दा पहिले पहाडी जिल्ला भनेर चिनिने रुकुमलाई विभाजनपश्चात् पूर्वी रुकुमलाई हिमाली जिल्लामा पारिएको छ । वन, पाटन, वनस्पति, जंगल, नदीनाला, तालतलैया, वन्यजन्तु यहाँका मुख्य सम्पदा हुन् । पश्चिम धौलागिरि हिमालय शृङ्खलासँग आबद्ध ७ हजार २ सय ४६ मिटर अग्लो पुथा हिमाल पूर्वी रुकुमको मुकुट मानिन्छ । पुथासँगै ५ हजार मिटरभन्दा अग्ला दोगारी, साम्जाङ, ङिम्कुँ, सिस्ने गरी आधा दर्जनभन्दा बढी हिमाल यहाँ अवस्थित हुनुले पनि पूर्वी रुकुम हिमाली जिल्लाको रूपमा दर्ज भएको पूर्वी रुकुमवासीहरूको दाबी छ । हिमचितुवा, रेडपाण्डा, कस्तुरी, हिमालयन थारजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुका साथै भोजपत्र, धुपी, लौठसल्लाजस्ता बहुउपयोगी वनपैदावारसँगै यार्सागुम्बा, पाँचऔंले, निर्मसी, सतुवाजस्ता मूल्यवान् जडीबुटीले यसै पनि पूर्वी रुकुम प्राकृतिक सम्पदा स्रोतको हिसाबले सम्पन्न हिमाली भेग हो । संरक्षण र पर्यटनलाई एउटै सूत्रमा व्यवस्थापन गर्न सकिएको खण्डमा विकासको दिगोपनालाई मूर्तरूप दिन सकिने विज्ञहरूको राय छ ।
वृत्तचित्र छायांकनका क्रममा लुकुम गाउँ पुगेका पर्यटनकर्मी कुमार चौलागार्इँका अनुसार पूर्वी रुकुम पर्यटनको सम्भावनायुक्त जिल्ला हो । कुमार भन्छन्, ‘प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संयोजन गरेर यहाँका बासिन्दाले पर्यटक तान्ने हैसियत राख्न सक्छन् । यसबाट उनीहरूले मनग्ये आम्दानी लिन सक्ने बलियो आधार छ ।’ यहाँ अवस्थित ३ स्थानीय तहको नामकरणले पनि प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको महत्त्व यसै झल्किन्छ । सिस्ने हिमालको नामबाट सिस्ने गाउँपालिका, पुथा हिमाल र उत्तरगंगा नदीको नामबाट पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका र यस मगर खाम क्षेत्रको प्रसिद्ध परम्परागत भूम्या नाचको नामबाट भूमे गाउँपालिका नाम यसै राखिएको होइन ।
यहाँका बासिन्दा सामूहिकतामा विश्वास गर्छन् । सामाजिक एकताबिना उनीहरू आफ्नो अस्तित्व स्विकार्न सक्तैनन्, चिनारी दिँदैनन् । घरहरू सकेसम्म एकै ठाउँमा समान संरचनामा निर्माण गरिनु, खेतीपातीमा अर्मपर्मको सिद्धान्त अपनाउनु, विकास निर्माणको सवालमा परम्परागत झाराप्रथा कायम राख्नु यहाँको सामाजिक–आर्थिक विकासका सामूहिक गतिविधि हुन् । सिकिस्त बिरामीहरूको नाममा बाटाघाटा र तलाउ सफाइ गर्नु, कुवा–पँधेराको सुधार गर्नु, देवल र धर्मशालाको मर्मतसंभार गर्नु निकै लोभलाग्दो परम्परागत रहनसहन हो । दिवंगत व्यक्तिको नाममा बाटो, चौतारो, बिसाउना, धर्मशाला, गोठ निर्माण गर्नु आफ्नो पुण्य आर्जनको काम ठान्छन् । तरुनीतन्नेरी मिलेर चौपारी तयार गर्छन् । यी विविध आयाम नियाल्दा संस्कृतिसँग विकास निर्माणको काम परम्परादेखि नै यहाँको समाजमा छाप भएर भएर बसेको यसै बुझ्न सकिन्छ ।
निश्चय पनि दसवर्षे हिंसात्मक गतिविधि रुकुमवासीका लागि बिर्सनलायक छ । सामाजिक–सांस्कृतिक एकताको बीचमा राजनीतिको रङ मिसिनु रुकुम जिल्लाको त्यो लामो अवधि निकै उतारचढाव र सकसपूर्ण रह्यो । माओवादीले बडो चलाखीपूर्वक यहाँको जनशक्तिलाई उपयोग गर्ने रणनीति अँगाल्यो । द्वन्द्वमा संलग्नहरू परिवारविहीन, आफन्तविहीन, घाइते, अपाङ्ग बने । थुप्रै चुनौति तथा लडाइँका अग्रमोर्चामा भिडेर पनि सकुशल बाँचेकाहरूको जीवन पनि कम कारुणिक र मर्मस्पर्शी छैन । सँगैका सहमित्रहरू बितेर गए, बाँचेकाहरू नाफाको जीवन बाँचिरहेका छन् । सशस्त्र संघर्षले गर्दा रुकुमका यी ग्रामीण भेग गहिरिएर प्रभावित हुनु अस्वाभाविक होइन । यसकारण भन्न सकिन्छ, नेपाली राजनीतिको एउटा अध्याय यो भेगले निर्माण गर्‍यो ।
सशस्त्र संघर्ष किन, के, कसरी सुरु भयो भन्ने सवालमा यहाँको समाज, संस्कृति, रहनसहन, चालचलन बुझ्न निकै आवश्यक छ । सबैभन्दा घतलाग्दो विषय त मगर खाम क्षेत्रलाई माओवादीहरूले आफ्नो आधारइलाका स्थापित गर्नुको राजनीतिक औचित्य के थियो भन्ने कुरा निकै गहन र चाखलाग्दो छ । यो विषय निश्चय पनि समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहासका विद्यार्थीहरूका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र खोजको विषय हो । यस भेगलाई मुख्य गन्तव्यस्थलको रूपमा कोरिएको गुरिल्ला ट्रेकमार्फत् भित्रिने विदशी पर्यटक अधिकांश द्वन्द्व व्यवस्थापनका शोधार्थी भेटिनुले पनि यो विषयको औचित्यता पुष्टि गर्छ । चीनको राजधानी बेइजिङ सहर नजिकैको येनान ३० वर्षे माओकालीन युद्धको उद्गम थलोको रूपमा परिचित भएझैं रोल्पा र रुकुमका मगर खाम भेगीय क्षेत्रलाई माओवादीहरूले विशेष जिल्ला घोषणासमेत गरेका थिए । विशेषत: मगर खाम भेगलाई नै नेपाली जनयुद्धको ‘येनान’ भन्न रुचाउँथे माओवादीहरू !
चुन्बाङ, रुकुमकोट, महत, लुकुम, मोराबाङ, राङ्सी, कोल, तकसेरा, हुकाम, खाराबाङ, रन्मामैकोटलगायतका गाउँहरू पूर्वी रुकुमका मुख्य आकर्षक गन्तव्य हुन् । यी गाउँका
बस्ती संरचना निकै लोभलाग्दा छन् । सबैको आ–आफ्नै विशेषता छन् ।
सीमा, क्याङ्सी र महतको धङ्गे नाचले पर्यटकलाई सहजै आकर्षण गर्छ । मनोरञ्जनमूलक यो नाच परम्परागत सामूहिक नाच हो । मगर भाषामा ‘धंगे’ को अर्थ हास्यकलाकार हो । हास्यकलाको माध्यमबाट स्थानीय बासिन्दालाई एकत्रित गर्न यो नाचको अहं भूमिका छ । यसै मौकामा कचहरी बसाएर गाउँघरका रीतिथिति बसाल्नेदेखि पुराना परम्पराहरूलाई परिमार्जन, संशोधन र परिष्कृत गरिन्छ । जाने–बुझेकाहरूका अनुसार गाउँका मुखिया, तालुकदारले त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई हास्यरसको माध्यमबाट आफ्नो निर्णय सर्वस्वीकार्य बनाउन यो रणनीति अख्तियारी गरेका हुन् । मेलापर्वका बेला नाचगान गरिँदा धंगेहरूलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिइन्छ । उनीहरू विभिन्न जंगली जनावरका भेषमा मुखुण्डो लगाएका हुन्छन् । धंगेहरू बढी उत्ताउला मात्र नभई उरन्ठेउला पनि हुन्छन् । एकथरी जानकारहरूका अनुसार धंगेहरूको उत्ताउलोपनमा बढी से बढी यौनका व्यंग्यकला प्रस्तुत गरिन्छ । यसले उपस्थित जनमासलाई एकप्रकारले उद्वेलित पार्छ, बेस्मारी हसाउँछ । उसबेला भुरेटाकुरे राजाहरूबीचको सम्बन्ध दर्साउन यस्ता सांस्कृतिक नृत्यहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । भनिन्छ, नेपाल एकीकरणपूर्व त्यस बेलाका राजा रजौटाहरूले आफ्नो जनशक्ति उत्पादन गराउन आफ्ना प्रजालाई यौनकलातर्फ झुकाव बढाइदिन यस्तो शैली अपनाउन लगाइएको हो । भनिन्छ— उसबेलाको डर, त्रास, भय र आक्रान्तको जगजगीमा पनि मानसिक रूपले सबल भई स्वच्छन्द भावले जीवन जिउन यस्ता धंगे नाचको मुख्य योगदान थियो ।
उसो त यहाँका सांस्कृतिक नृत्यहरू मूलत: सबै सामूहिक छन् । लहरै पंक्तिबद्ध भई अगुवालाई पछ्याएर नाचिन्छ । पैसेरी, भूम्या, डिग्रे, झोल्हा नाचहरू यहाँका परम्परागत सामूहिक नाच हुन् । भूम्या नाचमा पुरुषको गोलबद्ध लहरलाई महिलाले घेरिएको हुन्छ । पुरुषहरू खुकरी भिरेर नाच्छन् भने महिलाहरू रंगीन पछ्यौराका साथ लिँदै नाच्छन् । अगुवालाई पछ्याएर गोलबन्द भई नाच्नु यहाँका नाचहरूको विशेषता हो । यस्ता नाचले नेतृत्वकलाको विकास गराउनुका साथै एकता र सामूहिक भावनाको विकास अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । पाका र ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिइने यो नाचमा सामेल हुन युवायुवती र किशोरकिशोरी निकै हौसिन्छन् । यसले मुख्यगरी एकता, भ्रातृत्व र सामूहिकताको भावना प्रवद्र्धनसँगै सामाजिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने सन्देश प्रवाह गर्छ ।
सिंगारु नाच यहाँको एउटा सांस्कृतिक गहना हो । पुरुषलाई एउटा निश्चित परम्परागत पहिरनले रूपवती महिलाको भेषमा सिंगारपटार गराई मादल, दुँदी र झ्याली बजाएर काव्यात्मक शैलीको गीतिकथा गाएर नचाइन्छ । लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको यो नाच निकै रहस्यपूर्ण लाग्छ । उस बेला तेस्रो लिङ्गीहरूको व्यवहार र भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेर हाउभाउका साथ नाचगान गरिने यो नाचका नचारु विरलै छन् । यद्यपि ती पोख्त, सिपालु र निपुण हुनैपर्छ । सिंगारुहरू शालीन र भलाद्मी भएर नाच्दा उपस्थित दर्शकहरू शान्त र स्थिर रहन्छन् । गीतमा जोडिने टुक्काहरू भरिला मात्र हुँदैनन्, सौन्दर्यचेतले ओतप्रोत किस्साहरू पनि उत्तिकै उनिएका हुन्छन् ।
धामी–झाँक्रीका लागि लुकुम र तकसेरा निकै कहलिएका गाउँ हुन् । अन्य गाउँहरूमा पनि धामी–झाँक्रीको अस्तित्व अझै पनि जिउँदोजाग्दो छ । साउन पहिलो साता लुकममा मनाइने झाँक्री मेलामा झाँक्रीविद्याका विविध झल्कोहरू साँगोपाँगो देख्न सकिन्छ । यसबेला पारंगत झाँक्रीबाट नयाँले झाँक्रीविद्या प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । झाँक्रीविद्याको औपचारिक पुस्तान्तर यो बेला प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । दर्जनको संख्याभन्दा बढी यसमा संलग्न हुन्छन् । महिला झाँक्री पनि बडो साहसिक भएर पुरुष झाँक्रीसँग नाच्छन् । हाल यो मेला झाँक्री नाचले ख्याति कमाएको छ । यहाँको संस्कृतिमा धामी–झाँक्रीप्रतिको विश्वास, तिनले गर्ने परम्परागत स्वास्थ्य अभ्यासका साथै तिनै धामी–झाँक्रीले आजपर्यन्त स्वास्थ्य उपचारमा प्रयोग गर्ने स्थानीय जडीबुटीको प्रयोग अनौठो छ । आदिवासीय बौद्धिक ज्ञान आजको प्राकृतिक उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका लागि ग्रहनयोग्य मात्र नभई बौद्धिक खुराक बन्न सक्छ । वास्तवमा झाँक्रीवादले सदात्मा र दुरात्मालाई समान व्यवहार गर्छ भन्ने यिनले निश्चित तिथि तथा आइपरेको विपत्का बखत गर्ने कर्मकाण्डले त्यो बताउँछ । झाँक्रीले आफ्नो मुख्य अस्त्रको रूपमा ढ्याङ्ग्रोलाई स्विकार्छन् । तिनीहरू आफ्नो वस्त्र लगाएर झाँक्रीको पूर्ण शरीर लिइसकेपछि बडा भव्य देखिन्छन् । कतिपय झाँक्रीले आफ्नो कलालाई पेसागत व्यवसायको रूपमा समेत जोडेर जीवन निर्वाहसमेत गरिरहेका छन् ।
स्थानीय समुदाय मिहिनेती, परिश्रमी र लगनशील छन् । परम्परागत खेतीमा उनीहरू विशेष दख्खल राख्छन् । महिलाहरू परम्परागत हस्तकलाका उद्यममा व्यस्त रहन मन पराउँछन् । हावापानी र जमिन खेती गर्न योग्य छन् । मकै, गौं, जौं, कोदो, आलु, फापर, स्याउ यहाँका मुख्य खाद्य तथा नगदेबाली हुन् । सानीभेरी र उत्तरगैगको तटीय क्षेत्रमा धानको राम्रो उब्जनी हुन्छ ।
पूर्वी रुकुमको परिचय यतिले पूर्ण हुँदैन । त्यसका निम्ति यो भेगतिर घुमघाममा निस्कँदा बढी जाति हुन्छ । आउनुहोस्, कान्छो जिल्ला यहाँहरूको स्वागतमा हाजिर छ !
प्रकाशित : कार्तिक ११, २०७४ ०८:३१